Fikarakarana tanteraka - Foton Motor Group Co., Ltd.
rafitra serivisy manerantany
Miantehitra amin'ny tamba-jotra mizara eran-tany izahay mba hanomezana ho an'ny mpampiasa vokatra fenitra, serivisy, kojakoja, fiofanana ary fanohanana ara-teknika. Foton dia nanangana serivisy "Total Care" tsikelikely. Miaraka amin'ny ivon-toerana fizarana fizakan-tena miisa 13, ivom-panofanana serivisy isam-paritra 12, tambajotram-panompoana any ivelany miisa 1500, nanatsara hatrany ny rafitra serivisy manerantany i Foton mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa mitaky fikarakarana ary hanome traikefa lalina kokoa ho azy ireo. Foton dia mifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa ny traikefa amin'ny doka ary mamorona serivisy manokana sy matihanina ho an'ny mpanjifa.
Ivotoerana fitsinjaram-pahefana manerana izao tontolo izao
miantoka ny mitondra fiara tonga lafatra
Fikarakarana fikolokoloana mandritra ny androm-piainana rehetra mba hiantohana fiara mandeha lavorary. Ny serivisy isan-karazany ampiarahina lanja dia manome lanja bebe kokoa ho an'ny mpanjifa, mampiseho ny fikarakaran'i FOTON am-pahatsorana. Mitazona simposium amin'ny elanelam-potoana tsy tapaka mba hahatakarana ny takian'ny mpanjifa amin'ny fanatsarana hatrany sy ny fikatsahana ny hatsarana.
FANAMBOARANA NY SIMBA
Fitaovana fanandramana sy fanamboarana avo lenta, antoka momba ny fitaovana rehetra manodidina; ekipan'ny serivisy mitarika misy ny rafitra fiofanana matanjaka sy teknisiana momba ny serivisy matihanina.
Miorina manerantany ny rafitra fampahalalana PMS, EPC, WMS, DMS ary CRM ho an'ny fitantanana fitantanana ny famatsiana sy ny lisitra fizarana 3 ambaratonga (ivon-toerana manerantany, ivon-toerana misy ny faritra ary tobin'ny serivisy (masoivoho miavaka)), izay manome antoka ny fantsom-pamaky malama. nodinihan'ny mpanjifa an-tserasera.
100% faritra tena izy, vidiny ambany, fitazonana ny sandan'ny fiara; vidin'ny faritra mangarahara, vidin'ny ora fiasana ary fizotry ny fikojakojana; fantsona malama ho an'ny fitarainan'ny mpanjifa.
FAMPANDROSOANA SERVICE AN'NY OVERSEAS
Sarony ireo faritra lehibe
FOTON dia nanangana tambajotram-panompoana any ivelany izay misy ivon-toerana miisa 1 485 any amin'ny firenena sy faritra 80 mahery, ao anatin'izany ny ivon-toeram-pitantanana serivisy ambaratonga 168 ambaratonga ary fivarotana serivisy ambaratonga 2 -3 ambongadiny, 149 ireo mpaninjara ambaratonga 1 1 ary 1,205 level-2 mpivarotra fivarotana varotra, manarona faritra lehibe any Azia, Amerika, Afrika ary Eropa.
Politika serivisy mitarika indostrialy
Mifantoka amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ny FOTON dia nanamboatra politikam-panompoana mitarika indostrialy hanome fe-potoana maharitra ho an'ny mpanjifa. Ny politikan'ny serivisy dia miovaova arakaraka ny marika, tsipika vokatra ary modely. Raha mila tsipiriany momba ny politika fiantohana sy ny politika fiantohana tsy maintsy atao, dia jereo ny boky fampianarana momba ny fiantohana.
FANAZARAN-TENA SERVICE MANARAKA
fiofanana momba ny serivisy rehetra
FOTON dia nametraka ivon-toerana fanofanana serivisy 12 any Thailand, Russia, Vietnam, Saudi Arabia, Kenya, Cuba, Peru, Chile, Iran, Philippines, Columbia ary Algeria. FOTON izao dia manome lalam-piofanana amin'ny firenena sy faritra 100 mahery. FOTON dia manome mpamatsy serivisy fampiofanana amin'ny alàlan'ny ivon-toeram-panofanana momba ny serivisy manerantany. Ireo ivon-toeram-piofanana dia manome fiantsonan'ny serivisy vaovao miaraka amin'ny fiofanana momba ny fitantanana serivisy sy ny teknolojia serivisy mba hanampiana ireo tobin'ny serivisy hifanaraka amin'ny FOTON ary hanome serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa.
Ny ekipa izao dia misy mpandahateny 30, misy fiteny 20 mahery, anisan'izany ny anglisy, frantsay, espaniola, arabo ary rosiana. Ireo ivon-toeram-piofanana dia manome fiofanana momba ny fitantanana serivisy, ny fitantanana lozisialy momba ny lozisialy sy ny injenieran'ny serivisy, mikendry ny hanome ny mpanjifa tsirairay lesona iray maharitra iray mandritra ny androm-piainany.